Ny rindranasa Android 4 tsara indrindra handaminana ny sarin'ny galerinao | Androidsis
Fampiharana Android tsara handaminana sary Gallery
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, sary, Tutorials
Amin'ny ankapobeny, Matetika ny mpampiasa Android dia manana sary maro ao amin'ny galeriantsika. Zavatra mety ho olana lehibe indraindray. Satria tsy mora ho antsika foana ny mahita sary rehefa mitady azy isika na tsy milamina tsara foana. Mety mila fanampiana amin'izany isika. Soa ihany fa ananantsika fampiharana izay manampy anay handamina ny galeriana.
Noho ireo rindranasa ireo ho an'ny Android dia afaka mandamina ny galeri-tsary amin'ny fomba tsotra izahay. Araka izany dia afaka mahita sary foana isika rehefa mitady izany. Tsy misy isalasalana, safidy tsara ho an'ireo tsy voarindra izay mila fanampiana amin'ity lafiny ity.
Manana rindranasa vitsivitsy vitsivitsy ho an'ny telefaona Android izahay izay manampy anay handamina ny galerantsika. Ireo izay asehonay anao eto ambany dia ny sasany amin'ireo safidy feno sy miavaka indrindra izay hitantsika izao. Na dia misy maro hafa aza. Fampiharana inona avy no nahatonga ny lisitray?
3 QuickPic Gallery
Manomboka amin'izay mety ho safidy tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Android izahay. Se dia rindranasa napetraka ho fampiasa amin'ny telefaona Android maro. Izy io dia mety iray amin'ireo safidy feno azo atao. Misongadina izy satria havaozina matetika miaraka amina asa vaovao marobe, noho izany dia mivoatra be tokoa rehefa mandeha ny fotoana. Inona koa, mamela antsika hanao kopia maimaimpoana ao anaty rahona. Ny fampiharana mampiasa ny faharanitan-tsaina forongony hanasokajana ireo sary ary mamorona sokajy. Ka tsy mila manao na inona na inona ny mpampiasa amin'io lafiny io. Ho fanampin'izay, afaka mamorona rakikira, horonan-tsary na collage amin'ny fampiharana izahay. Safidy feno indrindra.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ary koa, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Faharoa, hitantsika ny iray amin'ireo safidy mahery kokoa misy amin'izao fotoana izao ho an'ny mpampiasa Android. Na dia miavaka amin'ny ho fampiharana ny maivana indrindra (zara raha milanja 12 MB). Azontsika atao ny manisy marika ny sary mba milamina foana izy ireo. Noho izany dia mamorona ny labozia tadiavinay izahay mba ho mora amintsika ny mahita ny sary. Na dia tiantsika aza ny fampiharana dia manome antsika marika amin'ny alàlan'ny default. Izy io dia manana interface tsara, tena mora ampiasaina ary manana mode night. Ho fanampin'izany, manolotra antsika ny mety hisian'ny arovy ny sary amin'ny alàlan'ny rantsantanana na teny miafina. Ka miaro ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ihany koa izy io.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity handaminana ny galeriana. Na dia ao anaty ny fampiharana aza dia mahita fividianana izahay.
Mifantoha - Galerie sary
Iray amin'ireo safidy tsotra indrindra mety ho hitantsika, fa tena mandeha tsara izany. Safidy lehibe ho an'ireo mpampiasa mitady zavatra tsotra, izay manatanteraka ny iraka ampanaovina azy ireo ary tsy manasarotra ny fiainantsika. Ahitana lahatahiry misy sary ary izy ireo dia nalamina ara-potoana. Io dia hahafahantsika mitady amin'ny alàlan'ny sary amin'ny fomba tsotra ary izy io dia fampiharana izay manome antsika ny Safidy hanao kopia ao anaty rahona. Un famolavolana tena tsotra sy ahazoana aina ampiasaina. Tokony holazaina ihany koa fa fampiharana maivana be izy io.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika.
Izahay dia mifarana amin'ny safidy iray hafa tena mahaliana izay niavaka noho izy tena feno. Izy io dia fampiharana izay manana ny fahaizana mamantatra ny metadata isaky ny sary novain'ny fampiharana hafa. Raha ny marina dia izy irery no afaka manao an'io amin'ny Android. Ary koa, raha namorona marika misy kilasy amin'ny fampiharana hafa isika dia afaka mitazona azy ireo amin'ity iray ity. Ka mifanaraka tsara amin'ny fomba fikarakarantsika sary izany amin'ny fotoana rehetra. Manome antsika ny fahaizana mandamina sary amin'ny lahatahiry na amin'ny filaharana araka ny fotoana koa izy io. Safidy mora ampiasaina io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » sary » Fampiharana Android tsara handaminana sary Gallery
Navoaka ny daty famoahana HTC U12, ny vidiny ary ny tsipiriany
Skype dia manitatra ny fanohanana amin'ny Android 4.0.3 ary avy eo